Maapụ njem ndị ahịa bụ otu ị si eji anya nke uche hụ ahụmịhe ndị ahịa gị na akara gị. Maapụ njem ndị ahịa na-edetu akara aka ndị ahịa gị n'ịntanetị na offline na akwụkwọ otu ị ga-esi tụọ mmetụta aka ọ bụla. Nke a na - enyere ndị na - ere ahịa aka ịghọta etu ndị ahịa si emekọrịta gị ka ị nwee ike ịkwalite njem ndị ahịa, wepu oghere na mgbochi, iji mee ka afọ ojuju ndị ahịa, itinye aka, mgbanwe na ohere dị elu.
N'adịghị ka ndị na-eme ngwa ahịa nke na-adị n'usoro, njem ndị ahịa nwere ike igosi ọtụtụ ụzọ ebe ndị ahịa na-eme mkpebi ma na-emeghachi omume na mmekọrịta ahụ. Maapụ njem ndị ahịa nwekwara ike inyere ndị ahịa gị aka lekwasịrị anya na mgbasa ozi na mmepe ọdịnaya gị maka ndị ahịa gị. Ọ bụ ezie na ndị ahịa gị nwere ike ịnwe mgbanwe na-enweghị njedebe, enwere ụzọ dị iche iche ị ga-ahụ na ndị ahịa na-agbada (ma ọ bụ na ị nwere olile anya na ha ga-agbada).